The kiss yokuqala unayo nomuntu ingenye zikhathi oyinhloko ebudlelwaneni luthela, futhi into the amabili uyohlale ukukhumbula. Uma une first kiss embi, khona ngokuvamile ayikhona nokululama ukuthi. Funda on ukubona indlela okufanele kiss usuku lwakho okokuqala:
Uma uqala kiss i Aries, ngokuvamile akudingeki ukuba sikhathazeke ngokuya fast too noma ukulinda isikhathi esifanele. Uma ufuna kiss kubo, do it ngaphandle kokungabaza. Bayalazisa wena ebamba okwamanje nokuba ngqo. Kwenze hot and inkanuko. Nakuba kufanele wazi, bona uzoba cishe kiss uqala.
Uma uqala kiss a Taurus, ufuna ukulinda. Musa ukwenze ngokushesha, futhi musa ukwenza kiss hot and fast. Lesi sibonakaliso ukhetha a ezishile slow, kanjalo kwenze kube last. Ngeke ukuthatha izinso, kanjalo kuyodingeka. Stroke noma kiss intamo yabo phambi kwakho kiss izindebe zabo ukuba ngempela uthole behamba.
Uma uqala kiss a Gemini, ukukutshela ufuna kiss kubo kuqala kubo. Lesi sibonakaliso esabela amazwi kangcono kunanoma iyiphi enye. Ithi eheha abantu besilisa in endlebeni yabo, ke zidla kuso. Ziklaba izingalo zabo noma ubambe isandla sabo (kokubili libuswa Gemini). Abanye Geminis ngeke ehlele kuqala, kodwa uku ngokuvamile ngothando futhi akukho ehlele, kanjalo uzoba.
Uma uqala kiss a Cancer, kufanele ukuthi bangabazali bendabuko futhi bathanda okunethezekile, kanjalo kube ekupheleni kosuku emnyango. Uma kiss kubo, azigcine ezingalweni zenu ukuze bazizwa bephephile futhi belondekile. Ungavumeli it go on eside khulu, futhi ungabi zingcolile.
Uma uqala kiss a Leo, ukwenza kube nezigigaba ngangokunokwenzeka. Lesi sibonakaliso ufuna ukuphila ukuba like a movie, futhi oyodumazeka lutho ezivamile futhi kuyisicefe. Kiss kubo ebusuku, in the liyidliva, noma phakathi emgwaqweni. Kwenze inkanuko futhi udwebe it out.
Uma uqala kiss a Virgo, hlola ukuphefumula kwakho kucala. Uma waya dinner, hit the lokugezela ngaphambi kokuba usilande ukuze enze lutho isiqiniseko is washaya amazinyo ungakwazi pop a Mint noma usebenzise mouthwash. Akukho ngeke ukubabuyisela off ngaphezu kissing a umlomo dirty. Prakthiza amasu omuhle ngoba ngempela izinto zabo.
IKHASI: 1 2